အိမျထောငျရှိအမြိုးသားတဈဦးနဲ့ ပတျသကျနခေဲ့တဲ့ အကွောငျးအရငျးအားလုံးကို ခရစေတှေ့ငျးကြ ဖျောထုတျခွငျးခံလိုကျရတဲ့ မငျးသမီးခြော ဂန်တဝငျ – Shwe Likes
Shwe | January 22, 2022 | Celebrity | No Comments
သရုပျေ ဆာငျမငျးသမီး ဂန်တဝငျကတော့ တဈခတျေ တဈခါက ဗီစီဒီခတျေမှာ အောငျမွငျခဲ့တဲ့မ ငျးသမီးတဈေ ယာကျဖွဈ ပါတယျ။ လကျရှိအခြိ နျထိ အိမျထောငျမွ ပုသေးပဲ အပြိုကွီးအဖွ ဈရပျတ ညျနတေဲ့ ဂန်တဝငျက ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကပဲ သူမရဲ့အခဈြရေး အကွော ငျးကို အငျတာ ဗြူးဗီဒီယိုတဈခုမှာ ဖွကွေား ခဲ့ပါတယျ။
ထိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဂန်တဝငျဟာ အိမျထောငျရှိအမြိုး သားတဈေ ယာကျနဲ့ ဖောကျပွနျနကွေောငျး ဖျောထုတျခံခဲ့ ရပါတယျ။ ဂန်တဝငျရဲ့ အိမျထောငျရှိအ မြိုးသားနဲ့ ဖောကျပွနျတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ထိုအိမျထောငျ ရှငျအမြိုးသားရဲ့ တရားဝငျဇနီးရဲ့ သူငယျခငျြးက အခုလိုပဲအကွော ငျးစုံခပြွ လာခဲ့ပါတယျ။
“ကိုယျ့စိတျထဲရ ငျထဲမှာ တကယျကွ ညျနူးပီတိဖွဈတဲ့ ကိစ်စ တဈခု အမွဲရှိတယျ။ ဘာလဲလို့မေးးး..? မွနျမာနိုငျငံက အနုပညာသညျ (ရုပျရှငျမငျးသမီး ၊ မျောဒယျ ၊ အဆိုတျောမ) တှေ ကို ခမျးခမျးနား နား တငျ့တယျစှာ မဂျလာဆောငျယူကွတဲ့ အမြိုးသားေ တှပျေါထှကျလာပွီး အိမျထောငျွ ပုသှားကွရငျ ကိုယျ့စိတျထဲ အဲ့ အမြိုးသားကို တကယျကြေးဇူး တငျတယျ။
မဟုတျရငျ သူတို့မှာ ခမျြးသာတဲ့ လငျကော ငျးမရမခငျြး အိမျထောငျသညျ ကလေးအဖတှေေ ၊ ပိုကျဆံခမျြးသာတဲ့ ငှရှောနိုငျတဲ့ အမြိုးသားတှရေဲ့ မိနျးမတှနေဲ့ ကလေးတှအေတှကျ စနှိုကျကွျောခံရမယျ့ High Risk တဈခုလြော့သှားပွနျပွီလို့ ကွိတျဝမျးသာေ ပးမိတယျ။
တဈခြို့ အနုပညာ သညျတှဟော..အိမျထောငျပွုပွီး လို့ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ အိမျထောငျရေးပွိုကှဲပွီး လမျးခှဲလိုကျ ရရငျလညျး နောကျအိမျထော ငျထပျမပွု ဘဲ ဒီအတိုငျးပဲ နသှေားကွ တဲ့သူမြိုးတှေ ရှိကွသလို ၊ နောကျအိမျထော ငျထပျပွုရငျလညျး လူပြိုလူ လှတျ ကိုပဲ အရှုပျအရှငျး ကငျးတဲ့သူမြိုးကိုပဲ ရှေးခယျြ ကွတယျ။ ”
“ယောကျြားဆိုတဲ့ အမြိုးကေ တာ့ ဖောကျပွနျဖို့ Probability Chance ကို အမွဲလိုလိုစောငျ့ေ နတတျကွ တာမြားတဲ့ သူတှမေို့ မိနျးမတှေ အိမျထောငျရေးေ ဖာကျပွနျနှုနျးနဲ့ နှိုငျးယှ ဉျကွညျ့ရငျ မိနျးမ ဖောကျပွနျလို့ အိမျထော ငျရေး ပွိုကှဲရတဲ့ ရာခိုငျနှုနျး အတျောနညျးပါတယျ/ အိမျထောငျသ ညျယောကျြားက ကိုယျ့ဆီလာပတျသကျခဲ့ရငျတောငျမှ မသိလို့ ပတျသကျခဲ့မိသညျ့တိုငျ သိတဲ့အခြိနျမှာ ရပျနိုငျရမယျ။
အိမျထောငျ သညျယောကျြား ၊ မိသားစု ရှိတာကို သိပါလကျြနဲ့ ကိုယျအ စားခြောငျ အနခြေောငျဖို့ သူမြားရှာထားတဲ့ငှကေို အလှယျတ ကူ သုံးဖွုနျးခငျြလို့ သူမြားယောကျြားနဲ့ ပတျသကျ ပွီးမှတော့ အဲ့မိနျးမရဲ့ အဆငျ့က လမျးဘေးကကွေးစား (ဖျောကာ) ထကျကို စိတျဓာတျယု တျညံ့သိမျဖငျြး အောကျ တနျး ကသြှားပွီ။
မယားကွီးတှခေ မြာမှာလညျး ကိုယျ့ဂုဏျ သိက်ခာကို ငဲ့ရလို့တဈမြိုး၊ ကိုယျ့မိဘအသိုငျးအဝိုငျး အရှကျရမှာမို့ ကွိတျခံစားရတာ တဈမြိုး၊ ကိုယျ့သားသမီးေ လးတှေ စိတျဒဏျရာတှေ ရပွီး ပကျြစီးသှား မှာစိုးလို့ ဖေးမပွီး တောငျ့ခံခဲ့ရတဲ့ ဘဝတှနေဲ့ ဆကျပွီး အသကျရှငျနသှေားကွရရှာတယျ။
အတိုဆုံးပွော ရရငျတော့ ဂန်တဝငျ မဆနျကွဖို့ 😠 True Story of Actress’s Cheating with Married Man အကွောငျး ပွောပွေ ပးဦးမယျ။(ကိုယျ့အခဈြဆုံး ငယျသူငယျခငျြး လနျဒနျမှာကြောငျးတ ကျခဲ့ရစဉျက ဒီသူငယျခငျြးအိမျမှာပဲ စားသောကျ အိပျနလောခဲ့ရတယျ)”“မငျးသမီးအတှ ကျကတော့ ဒီယောကျြား က သူ့အတှကျ အကိုလိုတဈမြိုး ၊
သူငယျခငျြးလိုတဈမြိုး (RS သကျတမျး ၂နှဈကြျောသှားပွီမို့) ဘဝခရီးကို လကျထပျစရာမလိုဘဲ နားလညျမှုတှေ နဲ့ ဆကျသှား မယျလို့ Public Interview ကွီးမှာ မရှကျမရှံ ဖွသှေားေ ပမယျ့ (မယားကွီးမှာ လနျဒနျကနရှေကျလှနျးလို့ အိပျယာထဲ ဗုနျးဗုနျးလဲပွီး သှေးဆော ငျ့တကျသှားခဲ့ရတယျ) အဖွဈအ ပကျြတှေ အားလုံးကို ကြှနျမသိခဲ့တာကွာပွီ။ 2019 ကတညျးက လနျဒနျက မယားကွီးခမြာ ခဈြသကျရေ…ဆိုပွီးး ကိုယျ့ဆီဖုနျးတှခေျေါပွီး ငိုတာငိုတာ။
“ငါ့ယောကျြား နဲ့ မငျးသမီး ဂန်တဝငျနဲ့ ခိုးပွီးဖော ကျပွနျကွပွီ” ငါနဲ့ လနျဒနျမှာေ ပါငျးနလေကျြနဲ့ သမီးလေး နှဈယောကျ မကျြနှာမှမထောကျ လုပျရကျကွ တယျဆိုပွီး ရူးမတတျွ ဖဈခဲ့တာ။ သူ့ယောကျြား အရှကျကှဲမှာစိုးလို့တဲ့ သူဘယျသူ့ကိုမှ မပွောဘူး ကွိတျငိုတယျ။
သမီးလေးတှကေိုလညျး ပေးမသိရှာဘူး။ အဖခေဈြ သမီးတှမေို့ သူတို့အတှကျ ဖခငျလိုတယျဆိုပွီး ရငျကှဲခံပွီး ပေါငျးခဲ့တယျ။ ”“2019 မှာ ယောကျြား ကို ခြော့ပွီး ရနျကုနျကနေ လနျဒနျပွနျချေါတော့ လဆေိပျမှာ မငျးသမီးက လိုကျပို့ပွီး အလှမျးတှသေယျေ နတဲ့ ဓာတျပုံတှကေ. ယောကျြားက လယောဉျပျေါမှာပဲ ရှိသေးတယျ
ပုံတှကေ မယားကွီးဆီ အကုနျတနျးရော ကျနပွေီ။ ကွညျ့ပါဦးဟယျဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုလာပွလို့ 2019 ကတညျးက ကြှနျမ အကုနျလုံး မွငျထားပွီးပွီ။ မယားကွီး ဖွဈသူက ပွောရှာတယျ။ “သူတို့လူမ သိအောငျ တိတျတိတျလေး ဖောကျပွနျနလေညျး ငါလညျးလူမ သိမခံခငျြပါဘူး ဟယျ။ ငါ့သမီးအပျြုပေါကျလေး နှဈယောကျအရှကျရ မှာစိုးတယျတဲ့..”
သို့သျော မွနျမာပွညျရဲ့ Social Media Interview ကွီးမှာ မငျးသမီးဖွဈသူက အခုယော ကျြားနဲ့သူက ငယျငယျကတညျးက သိခဲ့ကွပွီး နိုငျငံခွား မှာ နထေိုငျခဲ့ပွီးမှ သူနဲ့ ငယျခဈြတှေ လိုလို ကံကွမ်မာက ပွနျပေါငျးဖကျပေးလို့ပဲ သူတို့ပွနျခဈြပွီးဆုံကွရသလို ရုပျတညျကွီးနဲ့ ဖွသှေားတယျ။”
“မယားကွီးနဲ့ ကှာဖို့ အတ ငျးတှနျးအားတှေ ဖိပေးလို့ ယောကျြာွး ဖဈသူက သမီးတှရေော အိမျထောငျသကျ (၁၇) နှဈပေါငျး လာတဲ့ မိနျးမကိုပါ ပဈထားပွီး မွနျမာပွညျကို အပွီးပွနျ သှားတာမို့ သမီးအငယျဆုံးလေးမှာ အသကျ (၁၂နှဈသမီးလေး) အရှယျနဲ့ သူ့အဖေ ရုတျတရကျကွီး သူ့အနားကနေ ထှကျသှားတော့ စိတျဒဏျရာတှေ ကွိတျခံစားပွီး သူ့ကိုယျသူ လကျကောကျဝတျပို ဓားတှနေဲ့ မှစိတကျအောငျမှနျးပဈလို့ မိခငျဖွဈသူမှာ ကလေးရဲ့ Trauma တှကေို Therapist နဲ့ကို ပွနျကုသပေးနရေတယျလို့ ပွောရှာတယျ။ ဆေးရုံကိုတငျထားရပါတယျတဲ့။
2020 နှဈလညျမှ တရားဝငျကှာရှငျးခှ ငျ့ရတယျ။ အဲ့တော့ မငျးသမီးဖွသှေားတဲ့ RS သကျတမျးလညျး ၂နှဈကြျောနပွေီဆိုတာဟာ သူမြားလငျကို မကှာရေ သးဘဲ စနှိုကျကွျော ထားတဲ့ သကျတမျး (၂နှဈ) ကြျောတာလားလို့ မငျးသမီးဂန်တဝငျ ကိုသှားမေးလို ကျကွပါဦး။” ဆိုပွီး ပွောလာတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ Credit;
သရုပ်ေ ဆာင်မင်းသမီး ဂန္တဝင်ကတော့ တစ်ခေတ် တစ်ခါက ဗီစီဒီခေတ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မ င်းသမီးတစ်ေ ယာက်ဖြစ် ပါတယ်။ လက်ရှိအချိ န်ထိ အိမ်ထောင်မြ ပုသေးပဲ အပျိုကြီးအဖြ စ်ရပ်တ ည်နေတဲ့ ဂန္တဝင်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ သူမရဲ့အချစ်ရေး အကြော င်းကို အင်တာ ဗျူးဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။
ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂန္တဝင်ဟာ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုး သားတစ်ေ ယာက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေကြောင်း ဖော်ထုတ်ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ဂန္တဝင်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရှိအ မျိုးသားနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုအိမ်ထောင် ရှင်အမျိုးသားရဲ့ တရားဝင်ဇနီးရဲ့ သူငယ်ချင်းက အခုလိုပဲအကြော င်းစုံချပြ လာခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ့်စိတ်ထဲရ င်ထဲမှာ တကယ်ကြ ည်နူးပီတိဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု အမြဲရှိတယ်။ ဘာလဲလို့မေးးး..? မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာသည် (ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ၊ မော်ဒယ် ၊ အဆိုတော်မ) တွေ ကို ခမ်းခမ်းနား နား တင့်တယ်စွာ မဂ်လာဆောင်ယူကြတဲ့ အမျိုးသားေ တွပေါ်ထွက်လာပြီး အိမ်ထောင်ြ ပုသွားကြရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲ အဲ့ အမျိုးသားကို တကယ်ကျေးဇူး တင်တယ်။
မဟုတ်ရင် သူတို့မှာ ချမ်းသာတဲ့ လင်ကော င်းမရမချင်း အိမ်ထောင်သည် ကလေးအဖေတွေ ၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ ငွေရှာနိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် စနှိုက်ကြော်ခံရမယ့် High Risk တစ်ခုလျော့သွားပြန်ပြီလို့ ကြိတ်ဝမ်းသာေ ပးမိတယ်။
တစ်ချို့ အနုပညာ သည်တွေဟာ..အိမ်ထောင်ပြုပြီး လို့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲပြီး လမ်းခွဲလိုက် ရရင်လည်း နောက်အိမ်ထော င်ထပ်မပြု ဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ နေသွားကြ တဲ့သူမျိုးတွေ ရှိကြသလို ၊ နောက်အိမ်ထော င်ထပ်ပြုရင်လည်း လူပျိုလူ လွတ် ကိုပဲ အရှုပ်အရှင်း ကင်းတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ် ကြတယ်။ ”
“ယောကျာ်းဆိုတဲ့ အမျိုးကေ တာ့ ဖောက်ပြန်ဖို့ Probability Chance ကို အမြဲလိုလိုစောင့်ေ နတတ်ကြ တာများတဲ့ သူတွေမို့ မိန်းမတွေ အိမ်ထောင်ရေးေ ဖာက်ပြန်နှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှ ဉ်ကြည့်ရင် မိန်းမ ဖောက်ပြန်လို့ အိမ်ထော င်ရေး ပြိုကွဲရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အတော်နည်းပါတယ်/ အိမ်ထောင်သ ည်ယောကျာ်းက ကိုယ့်ဆီလာပတ်သက်ခဲ့ရင်တောင်မှ မသိလို့ ပတ်သက်ခဲ့မိသည့်တိုင် သိတဲ့အချိန်မှာ ရပ်နိုင်ရမယ်။
အိမ်ထောင် သည်ယောကျာ်း ၊ မိသားစု ရှိတာကို သိပါလျက်နဲ့ ကိုယ်အ စားချောင် အနေချောင်ဖို့ သူများရှာထားတဲ့ငွေကို အလွယ်တ ကူ သုံးဖြုန်းချင်လို့ သူများယောကျာ်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးမှတော့ အဲ့မိန်းမရဲ့ အဆင့်က လမ်းဘေးကကြေးစား (ဖော်ကာ) ထက်ကို စိတ်ဓာတ်ယု တ်ညံ့သိမ်ဖျင်း အောက် တန်း ကျသွားပြီ။
မယားကြီးတွေခ မျာမှာလည်း ကိုယ့်ဂုဏ် သိက္ခာကို ငဲ့ရလို့တစ်မျိုး၊ ကိုယ့်မိဘအသိုင်းအဝိုင်း အရှက်ရမှာမို့ ကြိတ်ခံစားရတာ တစ်မျိုး၊ ကိုယ့်သားသမီးေ လးတွေ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရပြီး ပျက်စီးသွား မှာစိုးလို့ ဖေးမပြီး တောင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေသွားကြရရှာတယ်။
အတိုဆုံးပြော ရရင်တော့ ဂန္တဝင် မဆန်ကြဖို့ 😠 True Story of Actress’s Cheating with Married Man အကြောင်း ပြောပြေ ပးဦးမယ်။(ကိုယ့်အချစ်ဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်း လန်ဒန်မှာကျောင်းတ က်ခဲ့ရစဉ်က ဒီသူငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲ စားသောက် အိပ်နေလာခဲ့ရတယ်)”“မင်းသမီးအတွ က်ကတော့ ဒီယောကျာ်း က သူ့အတွက် အကိုလိုတစ်မျိုး ၊
သူငယ်ချင်းလိုတစ်မျိုး (RS သက်တမ်း ၂နှစ်ကျော်သွားပြီမို့) ဘဝခရီးကို လက်ထပ်စရာမလိုဘဲ နားလည်မှုတွေ နဲ့ ဆက်သွား မယ်လို့ Public Interview ကြီးမှာ မရှက်မရွံ ဖြေသွားေ ပမယ့် (မယားကြီးမှာ လန်ဒန်ကနေရှက်လွန်းလို့ အိပ်ယာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲပြီး သွေးဆော င့်တက်သွားခဲ့ရတယ်) အဖြစ်အ ပျက်တွေ အားလုံးကို ကျွန်မသိခဲ့တာကြာပြီ။ 2019 ကတည်းက လန်ဒန်က မယားကြီးခမျာ ချစ်သက်ရေ…ဆိုပြီးး ကိုယ့်ဆီဖုန်းတွေခေါ်ပြီး ငိုတာငိုတာ။
“ငါ့ယောကျာ်း နဲ့ မင်းသမီး ဂန္တဝင်နဲ့ ခိုးပြီးဖော က်ပြန်ကြပြီ” ငါနဲ့ လန်ဒန်မှာေ ပါင်းနေလျက်နဲ့ သမီးလေး နှစ်ယောက် မျက်နှာမှမထောက် လုပ်ရက်ကြ တယ်ဆိုပြီး ရူးမတတ်ြ ဖစ်ခဲ့တာ။ သူ့ယောကျာ်း အရှက်ကွဲမှာစိုးလို့တဲ့ သူဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး ကြိတ်ငိုတယ်။
သမီးလေးတွေကိုလည်း ပေးမသိရှာဘူး။ အဖေချစ် သမီးတွေမို့ သူတို့အတွက် ဖခင်လိုတယ်ဆိုပြီး ရင်ကွဲခံပြီး ပေါင်းခဲ့တယ်။ ”“2019 မှာ ယောကျာ်း ကို ချော့ပြီး ရန်ကုန်ကနေ လန်ဒန်ပြန်ခေါ်တော့ လေဆိပ်မှာ မင်းသမီးက လိုက်ပို့ပြီး အလွမ်းတွေသယ်ေ နတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက. ယောကျာ်းက လေယာဉ်ပေါ်မှာပဲ ရှိသေးတယ်
ပုံတွေက မယားကြီးဆီ အကုန်တန်းရော က်နေပြီ။ ကြည့်ပါဦးဟယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုလာပြလို့ 2019 ကတည်းက ကျွန်မ အကုန်လုံး မြင်ထားပြီးပြီ။ မယားကြီး ဖြစ်သူက ပြောရှာတယ်။ “သူတို့လူမ သိအောင် တိတ်တိတ်လေး ဖောက်ပြန်နေလည်း ငါလည်းလူမ သိမခံချင်ပါဘူး ဟယ်။ ငါ့သမီးအပ်ျုပေါက်လေး နှစ်ယောက်အရှက်ရ မှာစိုးတယ်တဲ့..”
သို့သော် မြန်မာပြည်ရဲ့ Social Media Interview ကြီးမှာ မင်းသမီးဖြစ်သူက အခုယော ကျာ်းနဲ့သူက ငယ်ငယ်ကတည်းက သိခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံခြား မှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီးမှ သူနဲ့ ငယ်ချစ်တွေ လိုလို ကံကြမ္မာက ပြန်ပေါင်းဖက်ပေးလို့ပဲ သူတို့ပြန်ချစ်ပြီးဆုံကြရသလို ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဖြေသွားတယ်။”
“မယားကြီးနဲ့ ကွာဖို့ အတ င်းတွန်းအားတွေ ဖိပေးလို့ ယောကျာ်ြး ဖစ်သူက သမီးတွေရော အိမ်ထောင်သက် (၁၇) နှစ်ပေါင်း လာတဲ့ မိန်းမကိုပါ ပစ်ထားပြီး မြန်မာပြည်ကို အပြီးပြန် သွားတာမို့ သမီးအငယ်ဆုံးလေးမှာ အသက် (၁၂နှစ်သမီးလေး) အရွယ်နဲ့ သူ့အဖေ ရုတ်တရက်ကြီး သူ့အနားကနေ ထွက်သွားတော့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကြိတ်ခံစားပြီး သူ့ကိုယ်သူ လက်ကောက်ဝတ်ပို ဓားတွေနဲ့ မွစိတက်အောင်မွှန်းပစ်လို့ မိခင်ဖြစ်သူမှာ ကလေးရဲ့ Trauma တွေကို Therapist နဲ့ကို ပြန်ကုသပေးနေရတယ်လို့ ပြောရှာတယ်။ ဆေးရုံကိုတင်ထားရပါတယ်တဲ့။
2020 နှစ်လည်မှ တရားဝင်ကွာရှင်းခွ င့်ရတယ်။ အဲ့တော့ မင်းသမီးဖြေသွားတဲ့ RS သက်တမ်းလည်း ၂နှစ်ကျော်နေပြီဆိုတာဟာ သူများလင်ကို မကွာရေ သးဘဲ စနှိုက်ကြော် ထားတဲ့ သက်တမ်း (၂နှစ်) ကျော်တာလားလို့ မင်းသမီးဂန္တဝင် ကိုသွားမေးလို က်ကြပါဦး။” ဆိုပြီး ပြောလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Credit;
အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျခှငျ့ရတုနျးလေး အပွညျ့အဝ လုပျကိုငျခငျြလို အပွဈမမွငျကွဖို့ တောငျးပနျစကားပွောခဲ့တဲ့ ဘုနျးလြှံ
ခဈြသူလေး ကိုယျတိုငျထိုးပေးခဲ့တဲ့ ဘဝတှကျ အမှတျအရဆုံးဖွဈမယျ့ တကျတူးကို ထုတျပွခဲ့တဲ့ နရေဲ
သူမပိုငျဆိုငျတဲ့ မမွေို့က သိနျးပေါငျးမြားစှာတနျ တဲ့ မွကှေကျကွီးကို Live လှငျ့ ပွသလာတဲ့ မကေဗြာ
နှဈပေါငျးမြားစှာဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ မှေးနေ့ တိုငျး မှာ ဒီနှဈဟာ စိတျအဆ ငျးရဲဆုံးေ မှးနဖွေ့ဈခဲ့ရတ ယျဆို တဲ့ မူးလာ